ယာဉ်ရှာရန်ကြေးမုံလက်အောက်တွင်လုံခြုံရေးရှာရန် Mirrors ကတော့, ယာဉ် Undercarriage စစ်ဆေးရေးကြေးမုံထုတ်လုပ်သူများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:ယာဉ်ရှာရန်ကြေးမုံလက်အောက်တွင်,လုံခြုံရေးရှာရန် Mirrors ကတော့,ယာဉ် Undercarriage စစ်ဆေးရေးကြေးမုံ,မော်တော်ကားစစ်ဆေးရေးကြေးမုံလက်အောက်တွင်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ယာဉ်ရှာရန်စနစ်အောက်မှာ > ယာဉ်ရှာရန်ကြေးမုံလက်အောက်တွင်
ယာဉ်ရှာရန်ကြေးမုံလက်အောက်တွင် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ယာဉ်ရှာရန်ကြေးမုံလက်အောက်တွင်, လုံခြုံရေးရှာရန် Mirrors ကတော့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ယာဉ် Undercarriage စစ်ဆေးရေးကြေးမုံ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
ယာဉ်စစ်ဆေးရေးကြေးမုံလက်အောက်တွင် 40cm ပတ်ပတ်လည် (MS-V4)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မော်တော်ယာဉ်ရှာဖွေသည့်စနစ် (အသစ်က MS-V3) အရ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကိုယ်ထည်မှန် (MS-V2) အရ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
undercarriage စနစ်များ (MS-V3) ဖြည့်စွက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကိုယ်ထည်စစ်ဆေးရေးမှန် (MS-V5) အရ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကင်မရာကို အခြေခံ. စစ်ဆေးမှုစနစ် (MS-V5)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကားတစ်စီးစစ်ဆေးခြင်းကိုမှန် (MS-V3)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မော်တော်ယာဉ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းရှာဖွေရေးမှန် (MS-V2) အရ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ယာဉ် undercarriage မှန် (MS-V5)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လက်ကျင်းပစစ်ဆေးရေးမှန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးမော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးရေးကြေးမုံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကားတစ်စီးစစ်ဆေးရေးပုံဖမ်းတွန်းလှည်း (MS-V2) အရ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဗုံးများအတွက်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးမှန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဗုံးများအတွက်ယာဉ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းကိုမှန် (MS-V5) အရ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ယာဉ်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးမှန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Undercarriage စစ်ဆေးရေးမှန် (MS-V3)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကားတစ်စီးရှာဖွေရေးမှန် (MS-V5) အရ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကားတစ်စီးစစ်ဆေးရေးမှန်လက်အောက်တွင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ယာဉ် undercarriage စစ်ဆေးရေးမှန် (MS-V2)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ယာဉ်စစ်ဆေးရေးစနစ် (MS-V5)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ယာဉ်စစ်ဆေးရေးကြေးမုံလက်အောက်တွင် 40cm ပတ်ပတ်လည် (MS-V4)
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 60 / Piece/Pieces
ထုပ်ပိုး: ဘ: 1.1KG GW: 1.6KG 5. အိတ်အရွယ်အစား: * 260 550 * 80MM; package အရွယ်အစား: * 160 585 * 355MM (5pcs / စက္ဏူထူ)
ယာဉ်စစ်ဆေးရေးကြေးမုံ (က Round) အရ [မော်ဒယ် # က MS -V4 နယူး) ဗြဲ: P roduct မိတ်ဆက် MS-V4 40CM ပေါ့ပါးခုံးမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လူကြိုက်များက ultra-wide မှန်တပ်ဆင်-အခမဲ့ယာဉ်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးရေးမှန်ဖြစ်ပါသည်,...
မော်တော်ယာဉ်ရှာဖွေသည့်စနစ် (အသစ်က MS-V3) အရ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 35 / Piece/Pieces
ယာဉ်စစ်ဆေးရေးကြေးမုံ (က Round) အရ [မော်ဒယ် # က MS -V3နယူး) ဗြဲ: P roduct မိတ်ဆက် MS-V3 30CM ပေါ့ပါးခုံးမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လူကြိုက်များတပ်ဆင်ခ-အခမဲ့ယာဉ်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးရေးမှန်ဖြစ်ပါသည်, High-ပါဝါမြင့်မားသောအရောင်အဝါတောက်ပ...
ကိုယ်ထည်မှန် (MS-V2) အရ
ထုပ်ပိုး: ဘ: 1.1KG GW: 1.6KG 5. အိတ်အရွယ်အစား: * 260 550 * 80MM; package အရွယ်အစား: * 290 560 * 390MM (5pcs / စက္ဏူထူ)
SEARCH စစ်ဆေးရေး Mirror အောက် (မော်ဒယ် # MS-V2) အဆိုပါမှန်ခိုငျမွဲဖြစ်သည့်အထူး acrylic ပစ္စည်းဖန်ဆင်းထားသည်ပေမယ့်အပူနှင့်အချို့သောချေးဓာတုပစ္စည်းအရည်အားဖြင့်ထိခိုက်စေပါလိမ့်မည်။ စင်ကြယ်သောရေနှင့်ပျော့ပျောင်းသောအထည်ဖြင့်ရှင်းလင်းပါ။...
undercarriage စနစ်များ (MS-V3) ဖြည့်စွက်
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 28 / Piece/Pieces
ထုပ်ပိုး: package အရွယ်အစား: * 425 560 * 400MM (4pcs / စက္ဏူထူ); ဘ: 1.1KG GW: 1.6KG အိတ်အရွယ်အစား: * 360 560 * 110MM
ဦး NDER SEARCH စစ်ဆေးရေး Mirror (မော်ဒယ် # MS-V3) အင်္ဂါရပ်များ အဆုံးမဲ့ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်ချိန်ညှိဆုံလည်တပ်ဆင်ထားသော, လုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးမှန် maneuvering သည့်အခါပျက်စီးစေတ္ထုတားဆီးကူညီပေးမည့်မိုးသည်းထန်စွာတာဝန် extruded ရော်ဘာအနားကွပ်ရှိပါတယ်...
ကိုယ်ထည်စစ်ဆေးရေးမှန် (MS-V5) အရ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 58 / Piece/Pieces
မော်တော်ယာဉ်များစစ်ဆေး Mirror အောက် (မော်ဒယ် # MS-V5) ကုန်ပစ္စည်း Introductio ဎ: ယာဉ်ရှာရန်စနစ်လက်အောက်တွင်မှန်စစ်ဆေးနေမော်တော်ယာဉ်အောက်ရှိ V5 ကပင်မှောင်မိုက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် function အလုပ်လုပ်တယ် enable ထားတဲ့ LED အလင်းအရင်းအမြစ်တပ်ဆင်ထားသည်။...
ကင်မရာကို အခြေခံ. စစ်ဆေးမှုစနစ် (MS-V5)
ဦး NDER SEARCH စစ်ဆေးရေး Mirror (မော်ဒယ် # MS-V3) အင်္ဂါရပ်များ အဆုံးမဲ့ညှိနှိုင်းမှု, လုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးမှန်, လက်အောက်တွင်ယာဉ်ရှာရန်ကြေးမုံများအတွက်ချိန်ညှိဆုံလည်တပ်ဆင်ထားသော။ maneuvering သည့်အခါပျက်စီးစေတ္ထုတားဆီးကူညီပေးမည့်မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်...
မော်တော်ယာဉ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းရှာဖွေရေးမှန် (MS-V2) အရ
ယာဉ် undercarriage မှန် (MS-V5)
ဦး NDER SEARCH စစ်ဆေးရေး Mirror (မော်ဒယ် # MS-V3) အင်္ဂါရပ်များ ယာဉ်ရှာရန်စနစ်အောက်တွင်အဆုံးမဲ့ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်ချိန်ညှိဆုံလည်, တပ်မတော်မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး maneuvering...
ဦး NDER SEARCH စစ်ဆေးရေး Mirror (မော်ဒယ် # MS-V3) အင်္ဂါရပ်များ အဆုံးမဲ့ညှိနှိုင်းမှု, အလိုအလျောက်စောင့်ကြည့်စနစ်, လက်အောက်တွင်ယာဉ်ရှာရန်စနစ်များအတွက်ချိန်ညှိဆုံလည်တပ်ဆင်ထားသော maneuvering...
ဦး NDER SEARCH စစ်ဆေးရေး Mirror (မော်ဒယ် # MS-V3) အင်္ဂါရပ်များ မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးရေးကင်မရာအောက်မှာအဆုံးမဲ့ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်ချိန်ညှိဆုံလည်တပ်ဆင်ထားသော maneuvering သည့်အခါပျက်စီးစေတ္ထုတားဆီးကူညီပေးမည့်မိုးသည်းထန်စွာတာဝန် extruded...
တရုတ်နိုင်ငံ ယာဉ်ရှာရန်ကြေးမုံလက်အောက်တွင် ပေးသွင်း
မော်တော်ယာဉ်လက်အောက်တွင် seach မှန်ကားတစ်စီးအောက်တွင်သံသယဖြစ်ဖွယ်အမှုအရာကိုရှာအလွယ်တကူလူတွေကိုကူညီဖို့နေသူများကဖန်တီး။ အဓိကအားဖြင့်မှန်များထင်ဟပ်အလင်းသီအိုရီကိုသုံးပါ။ သံသယဖြစ်ဖွယ်အမှုအရာရှိလြှငျထုတ်ကုန်ရဲ့ bar ကိုအပေါ်တစ်ဦးမီးရှူးတိုင်သို့မဟုတ် LED ချွတ်အလင်းကို fix အားဖြင့်, လူများသည်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူစွာကြောင့်ယင်း၏အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်တို့အားဤသို့သောနိုင်ဂျီးရီးယား, Tunisa အဖြစ်အာဖရိကနိုင်ငံများကကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါဟာအရိုးရှင်းဆုံးဖန်တီးမှုများထဲမှဖြစ်ပါတယ်။
ယာဉ်ရှာရန်ကြေးမုံလက်အောက်တွင် လုံခြုံရေးရှာရန် Mirrors ကတော့ ယာဉ် Undercarriage စစ်ဆေးရေးကြေးမုံ မော်တော်ကားစစ်ဆေးရေးကြေးမုံလက်အောက်တွင် ရှာရန်ကြေးမုံလက်အောက်တွင်